Olee Otú Ị Ga-esi Bụrụ Onye Kraịst Tozuru Okè?
Ị̀ Na-agba Mbọ Itozu Okè Ka Kraịst?
Akọnuche Gị Ọ̀ Na-eduzi Gị Nke Ọma?
‘Guzosie Ike n’Okwukwe’
Olee Otú Jehova Si Egosi na Ọ Hụrụ Anyị n’Anya?
Olee Otú Anyị Ga-esi Gosi na Anyị Hụrụ Jehova n’Anya?
Ngọzi Jehova Emeela M Ọgaranya
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) SEPTEMBA 2015
‘Toruo otú Kraịst toruru.’—EFE. 4:13.
ABỤ: 69, 70
Olee otú ihe Baịbụl kwuru si abara Ndị Kraịst tozuru okè uru?
Olee otú Ndị Kraịst tozuru okè si enye aka eme ka ọgbakọ dịrị n’otu?
Olee otú imeta ezigbo ndị enyi ga-esi nyere anyị aka ịbụ Ndị Kraịst tozuru okè?
1, 2. Gịnị ka Onye Kraịst ọ bụla kwesịrị ịgbalịsi ike ime? Nye ihe atụ.
GỊNỊ ka nwaanyị má ihe na-eme ma ọ́ gaa ịzụ mkpụrụ osisi? O nwere ike ọ gaghị achọwa mkpụrụ osisi ndị kacha ibu ma ọ bụ ndị kacha ọnụ ala. Kama, ọ ga-ahọta ndị dị́ mma n’anya, ga-atọ ụtọ, ga-enyekwa ihe n’ahụ́. Ọ gaghị ahọrọ ndị na-akaghị aka ma ọ bụ ndị na-achaghị acha.
2 Mmadụ mụwa banyere Jehova, kpebiekwa ime baptizim, ya na Chineke ga na-adịkwu ná mma. Ọ ga na-agbalị ka ọ bụrụ Onye Kraịst tozuru okè. Itozu okè anyị na-ekwu abụghị mmadụ ịgba dimkpa ma ọ bụ ịkata ahụ́, kama ọ bụ itozu okè n’ihe gbasara ofufe Chineke. N’akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara Ndị Kraịst nọ́ n’Efesọs, ọ gwara ha na ha kwesịrị itozu okè. Ọ gbara ha ume ka ha dị́ n’otu n’okwukwe, na-amụkwa banyere Jizọs ka ha nwee ike ‘ịghọ dimkpa, ruo mgbe ha toruru otú Kraịst toruru.’—Efe. 4:13.
3. Olee otú ọgbakọ dị́ n’Efesọs si yie ọgbakọ ndị Jehova taa?
3 Mgbe Pọl degaara ụmụnna nọ́ n’Efesọs akwụkwọ ozi, afọ ole na ole agaala kemgbe e hiwere ọgbakọ ha. Ọtụtụ ndị nọ́ n’ọgbakọ ahụ bụ Ndị Kraịst tozuru okè. Ma, e nwere ndị kwesịrị ịgbakwu mbọ ka ha na Jehova dịkwuo ná mma. Otú ahụ ka ọ dịkwa taa. Ọtụtụ ụmụnna efeela Jehova ọtụtụ afọ, bụrụkwa Ndị Kraịst tozuru okè. Ma, a ka nwere ndị na-etozuchabeghị okè. Dị ka ihe atụ, a na-eme ọtụtụ puku ndị ọhụrụ baptizim kwa afọ. N’ihi ya, ụfọdụ kwesịrị ịgbalịsi ike ka ha tozuo okè. Gịnwa kwanụ?—Kọl. 2:6, 7.
OLEE OTÚ ONYE KRAỊST GA-ESI NA-ETO?
4, 5. Olee ihe ụfọdụ nwere ike ịdị iche n’ebe Ndị Kraịst tozuru okè nọ? Ma, olee ihe ndị e ji ama ndị niile tozuru okè? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
4 I leruo mkpụrụ osisi ndị chara acha anya, ị ga-ahụ na ha niile anaghị aha. Ma, ha niile nwere ihe gosiri na ha chara acha. Otú ahụ ka ọ dị ná Ndị Kraịst tozuru okè. Ha nwere ike isi mba dị iche iche. Afọ ndụ ha, ihe ndị na-amasị ha, na otú ha si akpa àgwà nwekwara ike ịdị iche iche. Ma, ndị niile bụ́ Ndị Kraịst tozuru okè nwere àgwà na-eme ka a mata na ha tozuru okè. Olee ụfọdụ n’ime àgwà ndị ahụ?
5 Otú Onye Kraịst tozuru okè si ebi ndụ na-egosi na ọ na-eṅomi Jizọs ma ‘na-esochi nzọụkwụ ya anya.’ (1 Pita 2:21) Gịnị ka Jizọs kwuru na ọ dị ezigbo mkpa? Ọ bụ iji obi anyị dum, mkpụrụ obi anyị dum, na uche anyị dum hụ Jehova n’anya, hụkwa onye agbata obi anyị n’anya dị ka onwe anyị. (Mat. 22:37-39) Onye Kraịst tozuru okè na-agbalịsi ike ime ihe a Jizọs kwuru. Otú o si ebi ndụ na-egosi na ihe kacha ya mkpa bụ adịm ná mma ya na Jehova. Ọ na-ahụkwa ndị ọzọ n’anya n’eziokwu.
Otú Ndị Kraịst katarala ahụ́ ga-esi gosi na ha dị umeala n’obi ka Kraịst bụ ịna-akwado ndị na-akatabeghị ahụ́ na-edu ndú n’ọgbakọ (A ga-akọwa ya na paragraf nke 6)
6, 7. (a) Olee àgwà ụfọdụ e ji ama Onye Kraịst tozuru okè? (b) Gịnị ka anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị?
6 Ma, ịhụnanya bụ otu n’ime àgwà Onye Kraịst tozuru okè kwesịrị inwe. (Gal. 5:22, 23) O kwesịkwara ịdị nwayọọ, na-ejide onwe ya, nweekwa ogologo ntachi obi. Àgwà ndị a ga-enyere ya aka idi nsogbu bịaara ya ma ghara iwewe iwe. Ọ ga-emekwa ka o nwee olileanya mgbe nsogbu ndị ọ na-atụghị anya ha bịaara ya. Mgbe Onye Kraịst tozuru okè na-amụ ihe, ọ na-achọsi ike ịhụ ndụmọdụ Baịbụl ndị ga-enyere ya aka ịma ihe dị́ iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ. N’ihi ya, ihe ndị ọ na-ekpebi na-egosi na ọ bụ Onye Kraịst tozuru okè. Dị ka ihe atụ, ọ na-ege ntị n’ihe akọnuche ya e ji Baịbụl zụọ na-agwa ya. Ọ na-adị umeala n’obi. N’ihi ya, ọ na-ekweta na ntụziaka Jehova na iwu ya dị mma mgbe niile karịa nke ya. * Ọ na-eji ịnụ ọkụ n’obi ekwusa ozi ọma, na-agbalịsikwa ike ka ọgbakọ dịrị n’otu.
7 N’agbanyeghị afọ ole anyị ferela Jehova, onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị ịjụ onwe ya, sị, ‘È nwere ebe ụfọdụ m kwesịrị ịgba mbọ na-emekwu ka Jizọs? È nwere ebe ndị m kwesịrị ịgbanwe?’
“NRI SIRI IKE DỊỊRỊ NDỊ TOZURU OKÈ”
8. Olee otú Jizọs maruru Akwụkwọ Nsọ ma ghọta ya?
8 Jizọs Kraịst ma ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ, ghọtakwa ya nke ọma. Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ya na ndị nkụzi nọ́ n’ụlọ nsọ kwurịtara ihe e dere na ya. Baịbụl kwuru, sị: “Nghọta o nwere na ihe ọ na-aza ha nọ na-eju ndị niile na-ege ya ntị anya.” (Luk 2:46, 47) Mgbe Jizọs mechara malite ikwusa ozi ọma, otú o si jiri Okwu Chineke zaa ndị iro ya okwu mere ka ọnụ mechie ha.—Mat. 22:41-46.
9. (a) Olee ihe Onye Kraịst chọrọ itozu okè kwesịrị ịna-eme? (b) Gịnị mere anyị ji kwesị ịna-amụ Baịbụl?
9 Onye chọrọ ịbụ Onye Kraịst tozuru okè na-eṅomi Jizọs, na-agbakwa mbọ ịghọta Baịbụl nke ọma. Ọ ga na-agụchi ya anya iji mata eziokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ n’ihi na ọ ma na “nri siri ike dịịrị ndị tozuru okè.” (Hib. 5:14) Onye Kraịst tozuru okè na-agbalịsi ike inwe “ezi ihe ọmụma banyere Ọkpara Chineke.” (Efe. 4:13) N’ihi ya, jụọ onwe gị, sị: ‘M̀ na-agụ Baịbụl kwa ụbọchị? M̀ na-ewepụta oge m ga-eji na-amụ ihe? Ànyị na-enwe ofufe ezinụlọ kwa izu?’ Ị mụwa Baịbụl, leruo anya ka ị chọta ihe ndị ga-enyere gị aka ịghọtakwu otú Jehova si ele ihe anya. Gbalịa jiri ihe ndị ị mụtara na-ekpebi ihe ị na-eme. Ime otú ahụ ga-enyere gị aka ịbịarukwu Jehova nso.
10. Olee otú Onye Kraịst tozuru okè si ele iwu Chineke na ụkpụrụ ya anya?
10 Onye Kraịst tozuru okè ma na ihe o kwesịrị ime abụghị naanị ịma ihe Baịbụl kwuru. O kwesịrị ịhụ iwu Chineke na ụkpụrụ ya n’anya. Otu n’ime ụzọ ọ ga-esi gosi ya bụ ịna-eme ihe Jehova chọrọ kama ịna-eme ihe dị́ yanwa mma. O kwesịkwara ịgbanwe otú o si ebi ndụ, otú o si eche echiche, na otú o si akpa àgwà. Ka Onye Kraịst na-eme mgbanwe ndị a, ọ na-eyiri “mmadụ ọhụrụ ahụ nke e kere dị ka uche Chineke si dị, n’ezi omume na iguzosi ike n’ihe.” (Gụọ Ndị Efesọs 4:22-24.) Anyị kwesịrị icheta na Chineke ji mmụọ nsọ ya duzie ndị dere Baịbụl. N’ihi ya, mgbe Onye Kraịst na-amụ Baịbụl, mmụọ nsọ Chineke na-enyere ya aka ịghọtakwu Baịbụl na ịhụkwu Chineke n’anya. Ọ na-emekwa ka ya na Jehova dịkwuo ná mma.
NA-AGBA MBỌ KA ỌGBAKỌ DỊRỊ N’OTU
11. Olee ụdị ndị gbara Jizọs gburugburu mgbe ọ nọ n’ụwa?
11 Mgbe Jizọs nọ n’ụwa, o zuru okè. Ma, ndị gbara ya gburugburu bụ ndị na-ezughị okè. Nne ya na nna ya na ndị ikwu ya ezughị okè. Ndị na-eso ụzọ ya medịrị ihe gosiri na ha dị mpako, na-achọkwa naanị ọdịmma onwe ha. Dị ka ihe atụ, n’abalị bọtara ụbọchị Jizọs nwụrụ, ‘esemokwu kpụ ọkụ n’ọnụ bilitere n’etiti ha banyere onye ọ bụ n’ime ha nke yiri ka ọ̀ bụ ya kasị ukwuu.’ (Luk 22:24) N’agbanyeghị na ha ezughị okè, obi siri Jizọs ike na ha ga-emecha bụrụ Ndị Kraịst tozuru okè nakwa na ha ga-aghọ ọgbakọ dị́ n’otu. N’otu abalị ahụ, Jizọs rịọrọ Nna ya nke eluigwe ka o nyere ha niile aka ịdị n’otu. Ọ rịọrọ ya, sị: “Ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị onwe gị, Nna, na mụ onwe m dị n’otu, mụ onwe m na gị adịrịkwa n’otu, ka anyị na ha wee dị n’otu, . . . ka ha wee bụrụ otu dị nnọọ ka anyị bụ otu.”—Jọn 17:21, 22.
12, 13. (a) Olee otú Ndị Efesọs 4:15, 16 si gosi na anyị kwesịrị ịna-eme ka ọgbakọ dịrị n’otu? (b) Gịnị nyeere otu nwanna aka ịmụta ịna-eme ka ọgbakọ dịrị n’otu?
12 Onye Kraịst tozuru okè na-enye aka eme ka ọgbakọ dịrị n’otu. (Gụọ Ndị Efesọs 4:1-6, 15, 16.) Ebe anyị bụ Ndị Kraịst, anyị chọsiri ike ka anyị bụrụ ndị ‘e jikọrọ ọnụ n’otu,’ ya bụ, ka anyị jiri otu obi na-arụkọ ọrụ. Baịbụl kwuru na anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi ka anyị nwee ike ịdị n’otu. Onye Kraịst tozuru okè na-eji obi umeala eme ka ọgbakọ dịrị n’otu, á sịgodị na ndị ọzọ emejọọ ya n’ihi ezughị okè. N’ihi ya, jụọ onwe gị, sị: ‘Olee ihe m na-eme ma e nwee ihe nwanna na-emetaghị? Gịnị ka m na-eme ma nwanna mejọọ m? M̀ na-akwụsị ịtụpụrụ ya ọnụ? Ka m̀ na-agba mbọ ka anyị kpezie?’ Onye Kraịst tozuru okè na-agbalị idozi ihe seere ya na onye ọzọ kama ịna-akpata nsogbu.
13 Chegodị banyere ihe otu nwanna mere. N’oge mbụ, iwe na-ewe ya ma é nwee ihe nwanna na-emetaghị. O mechara kpebie iji Baịbụl na akwụkwọ bụ́ Insight on the Scriptures mụọ banyere ihe ndị mere Devid. Gịnị mere o ji chọọ ịmụ banyere Devid? Ọ sịrị: “Ụfọdụ ndị ohu Chineke mere Devid ihe ọjọọ. Dị ka ihe atụ, Eze Sọl gbara mbọ igbu ya, ụfọdụ ndị achọọ ịtụ ya nkume. E nwedịrị mgbe nwunye ya kwara ya emo. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Ma, Devid ekweghị ka ihe ndị ahụ mee ka ọ kwụsị ịhụ Jehova n’anya. Devid dịkwa obi ebere. M kwesịkwara ịmụta ịna-eme ebere. Ihe m mụtara mere ka m gbanwee otú m si ele ihe nwanna na-emetaghị anya. Anaghịzi m agụkọrọ ụmụnna ihe ha mejọrọ. Kama, m na-agba mbọ ka ọgbakọ dịrị n’otu.” Ị̀ na-agba mbọ ka ọgbakọ dịrị n’otu?
META NDỊ NA-EME UCHE CHINEKE ENYI
14. Olee ụdị ndị Jizọs metara enyi?
14 Jizọs Kraịst mesoro onye ọ bụla omume ọma. Ahụ́ ruru onye ọ bụla bịara ya nso ala, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị na-eto eto ma ndị agadi ma ụmụaka. Ma, ọ bụghị onye ọ bụla ka o metara enyi. Ọ gwara ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi, sị: “Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu emee ihe m na-enye unu n’iwu.” (Jọn 15:14) Ndị Jizọs metara enyi bụ ndị jí obi ha niile na-eso ya nakwa ndị hụrụ Jehova n’anya ma na-efe ya. Ndị ị na-emeta enyi hà bụ ndị jí obi ha niile efe Jehova? Gịnị mere anyị ji kwesị ime otú ahụ?
15. Olee uru ndị na-eto eto ga-erite ma ha meta Ndị Kraịst tozuru okè enyi?
15 E nwere mkpụrụ osisi ndị anwụ na-enyere aka ịcha nke ọma. Otú ahụkwa ka ịhụ ụmụnna anyị n’anya ga-enyere anyị aka ịbụ Ndị Kraịst tozuru okè. Ị̀ bụ onye na-eto eto nke na-eche ihe ị ga-eji ndụ gị eme? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-adị mma ka i meta ndị ferela Jehova ọtụtụ afọ enyi nakwa ndị na-agba mbọ ka ọgbakọ dịrị n’otu. O nwere ike ịbụ na ha ediela ọtụtụ nsogbu na ihe isi ike ka ha na-efe Jehova. Ụdị ndị ahụ ga-enwe ike inyere gị aka ikpebi ihe kacha mma ị ga-eji ndụ gị eme. Ọ bụrụ na gị na ụdị ndị ahụ ana-akpa, ha ga-enyere gị aka ịna-eme mkpebi ndị dị́ mma, nyekwara gị aka itozu okè.—Gụọ Ndị Hibru 5:14.
16. Olee otú ụmụnna ndị katarala ahụ́ si nyere otu nwanna nwaanyị na-eto eto aka?
16 Dị ka ihe atụ, otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Helga kwuru na mgbe ọ nọ n’afọ nke ikpeazụ n’ụlọ akwụkwọ, ụmụ klas ha nọ na-ekwu ihe dị́ iche iche ha ga-eji ndụ ha eme. Ọtụtụ n’ime ha chọrọ ịga mahadum ka ha nweta ezigbo ọrụ. Ma, Helga na ndị enyi ya n’ọgbakọ kwurịtara ihe ọ ga-eme ma ọ gụchaa. Ọ sịrị: “Ọtụtụ n’ime ha tọrọ m, ha nyekwaara m aka nke ukwuu. Ha gbara m ume ka m malite ozi oge niile. M mechara sụọ ụzọ oge niile ruo afọ ise. Ugbu a ọtụtụ afọ garala, obi dị m ụtọ na m jeere Jehova ozi n’oge m na-eto eto. Anaghị m akwa ụta na m mere otú ahụ.”
17, 18. Olee otú itozu okè ga-esi baara anyị uru?
17 Iṅomi Jizọs ga-enyere anyị aka ịbụ Ndị Kraịst tozuru okè. Anyị ga-abịarukwu Jehova nso, na-agbalịsikwa ike ijere ya ozi. Ọ bụrụ na onye na-efe Chineke abụrụ Onye Kraịst tozuru okè, ọ ga-eji ike ya niile na-ejere Chineke ozi. Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume, sị: “Meenụ ka ìhè unu na-enwu n’ebe ndị mmadụ nọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nọ n’eluigwe otuto.”—Mat. 5:16.
18 Anyị amụtala na Onye Kraịst tozuru okè na-abara ọgbakọ ezigbo uru. Ihe ga-egosi na Onye Kraịst tozuru okè bụ ihe ọ na-eme n’ihi akọnuche Chineke nyere ya. Olee otú akọnuche anyị ga-esi nyere anyị aka ịna-eme mkpebi dị mma? Oleekwa otú anyị ga-esi na-akwanyere akọnuche ndị ọzọ ùgwù? Anyị ga-atụle ajụjụ ndị a n’isiokwu na-esonụ.
^ para. 6 Dị ka ihe atụ, e nwere ike ịgwa ụfọdụ ụmụnna ndị katarala ahụ́ ka ha nyefee ụmụnna ndị na-akatabeghị ahụ́ ọrụ ha na-arụ nakwa ka ha kwadowe ụmụnna ndị ahụ.
mailto:?body=Ị̀ Na-agba Mbọ Itozu Okè Ka Kraịst?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015681%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ị̀ Na-agba Mbọ Itozu Okè Ka Kraịst?
SEPTEMBA 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)
mailto:?body=SEPTEMBA 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw15%26issue%3D20150915%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=SEPTEMBA 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)
“Ugbu A Unu Maara Chineke,” Gịnị Ka Unu Kwesịrị Ime?